Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Ny sampany telo dia hateloana. Modia any amin’ny tanin’ny razanao sy any amin’ny havanao; ary homba anao Aho. Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah. Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: Indro, mbola antoandrobe ny andro, ka tsy mbola mby amin’ny fotoana famoriana ny omby aman’ondry; ampisotroy ny ondry aman’osy, dia andeha, andraso. Avy any Harana izahay.
Izaho no Farao, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra. Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, 17 dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin’ny fahavalony; 18 ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako. Aza matahotra ianao; fa izato koa no zazalahy ho anao. Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany.
Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy izany, nefa tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko.
Misotroa, ary hampisotroiko koa ny ramevanao; dia nisotro aho, ary nampisotro ny rameva koa izy. Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin’ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mihainoa ahy, ka mba iangavio kely amin’i Efrona, zanak’i Zohara, 9 mba homeny malgasy ny zohy ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin’ny sisin’ny sahany; amin’izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana.
Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Mandohaleha; ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao? Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Andeha isika hankany Dotana. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin’ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa efa ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany.
Dia lasa nanontany tamin’i Jehovah izy. Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho. Omban’Andriamanitra ianao amin’izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin’Andriamanitra aho fa tsy hamitaka ahy na ny zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin’ny tany izay ivahinianao.
Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin’ny Hetita; raha maka vady malagaxy zanakavavin’ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin’ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko?
Ce document au format PDF 1. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Ry Hagara, andevovavin’i Saray, avy taiza ianao? Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha? Nahoana no tezitra ianao? Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao: Dia nirahiny hiala avy teo amin’ny lohasahan’i Hebrona izy, dia nankany Sekema.
Miverena any amin’ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Ahoana no anontanianao ny anarako?
Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Ary Josefa namoha ny trano fitehirizam-bary ka nivaro-bary tamin’ny Egyptiana.
Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Angamba malagawy no ho hita ao. Tsy miandry ondry any Sekema va ny rahalahinao? Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy.
Ary nifoha maraina izy ka nanao hoe: Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy. Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Oholibama, zanakavavin’i Ana, vadin’i Esao.